Vashandi veHurumende Vanoratidzira muHarare
Vashandi vehurumende varatidzira neChipiri muHarare vachiti havasi kufara nekusawedzerwa mari dzavanofanirwa kunge vachitambiriswa.
Varatadziri ava vatanga kuratidzira muHarare Gardens ndokuenda kumahofisi egurukota rezvemari, Va Tendai Biti, uko kwavasiya vakanda gwaro renyunyuto nepasi pegonhi.
Varatidziri ava vazoendawo kudare reparamende kwavasiya gwaro renhuna dzavo kumahofisi emutauriri wedare reparamende, VaLovemore Moyo, pamwe nemutungamiri wedare reseneti, iro ratambirwa nemunyori wedare iri, Va Austin Zvoma.
Mutungamiri we Apex Council , Amai Tendai Chikowore, vati chinovarwadza ndechekuti hurumende haisi kuita zvayakavimbisa.
Munyori mukuru musangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe, Va Raymond Majongwe, vati chinovarwadza ndechekuti mari yemangoda nezvimwe zvicherwa zvenyika iri kudyiwa semushonga wemusana nevanhu vashoma asi vashandi vehurumende vasina chavanowana.
Vatiwo chimwewo chiri kuvakonzeresa kuti vasvimhe misodzi inyaya yekuti nhengo dzeparamende dzakawedzerwa mari yadzinotambiriswa asi ruzhinji rwevashandi rwuchiramba rwuchinhonga svosve nemuromo.
Vashandi vazhinji vehurumende vari kuda kutambiriswa mari inodarika mazana mashanu nemakumi matanhatu emadhora pamwedzi sezvo vashandi vazhinji vari muhurumende vachitambira mari asingasvike pamari iyi.